Iimpawu ezivela kwiDamond Sutra
Ivesi elivela kwi-Diamond Sutra
Enye yeendima ezicatshulwe rhoqo kwiMahayana Buddhist sutras yili vesi elifutshane -
Ngoko ufanele ujonge eli hlabathi elikhawulezayo -
Inkwenkwezi ekunteni kokusa, i-bubble emlambo,
I-flash of lighting in cloud of summer,
Isibane esikhanyayo, i-phantom, kunye nephupha.
Olu guqulelo oluqhelekileyo lusetyenziswe ngokukodwa ukwenzela ukuba imirhumo ngesiNgesi. Umguquleli oyi-Red Pine (uBill Porter) usinika inguqulelo engaphezulu -
Njenge sibane, i-cataract, inkwenkwezi kwithuba / ingcamango, i-dewdrop, i-bubble / iphupha, ifu, ukukhanya okukhanya / ukujonga zonke izinto ezidaliweyo ezinje.
Kwiimibhalo zeBuddhist, ivesi elifutshane njengaleli libizwa ngokuba yi- gatha . Kuthetha ntoni le gatha, kwaye ngubani owathi?
Le vesi ifumaneka kumabini ama-sutras, i- Diamond Sutra kunye ne-sutra ebizwa ngokuthi "Ukufezeka koBulumko kwi-Lines 500." Zombini ezi zibhalo ziyinxalenye yombhalo weetekisi ezibizwa ngokuthi iPrajnaparamita Sutras . Prajnaparamita uthetha " ukuphelela kobulumko ." Ngokwabaphengululi, ubuninzi bePrajnaparamita Sutras mhlawumbi babhalwa ekuqaleni kwinyanga yokuqala yokuqala yeminyaka eyi-CE, nangona abanye bangabakho ukususela ngomhla we-1 BCE.
Le vesi kaninzi ibonakala kuBuddha, kodwa ukuba abaphengululi balungile malunga nomhla, uBuddha wembali akazange athethe oku. Siyakwazi ukucinga nje ukuba ngubani umlobi onokuthi abe nguye.
I-Gatha kunye neDamond Sutra
Kwiibhalo ezimbini eziqulethe le ndinyana, iDamond Sutra ifundwa ngokubanzi.
I-gatha ifumaneka kakhulu ekupheleni kwe-sutra, kwaye ngamanye amaxesha ifundwa njengokushwankqiswa okanye inkcazo yesicatshulwa esandulelayo. Abanye abahumushi beesiNgesi baye "bafaka" itekisi encinci ukuba bagxininise indima yevesi njengesiqingqiweyo okanye ivesi le-capping. Le ndinyana ibonakala ngathi ingagxininiswa , ngoko ke sihlala sixelelwa ukuba iDamond Sutra ngokuyinhloko iphathelele ukungapheli.
Umphenyi-umhumushi we-Red Pine (uBill Portman) akavumelani. Ukufunda ngokoqobo amaTshayina namaSanskrit akubonakali ukuba yinkcazelo yombhalo kuzo zonke, uthi.
"Le gatha, ndincoma, akuthethi ukuba ngumzekelo wokuchazela le mfundiso, ngokuba uBuddha usandule ukuba ingcaciso ye-bodhisattva ayikho nkcazo. Le gatha ngumnikelo osinikwe nguBuddha, indlela kaBuddha yokuthetha Sala kakuhle." [I-Red Pine, i -Diamond Sutra (Counterpoint, 2001), iphe. 432]
I-Red Pine iphinda ibuze nokuba i-gatha yayingumxholo wokuqala, olahlekileyo. I-gatha efanayo inika isishwankathelo soPhulo loBulumko kwiiLitha ezili-500, kwaye ngokuqinisekileyo iyafaneleka ngakumbi kuloo sutra. Omnye umkopishi osekudala wayedinga ukuba iDamond Sutra idinga ukugqiba ngokugqithiseleyo kwaye iphoswe kwindinyana eyithandayo.
I-Diamond Sutra ngumsebenzi wobunzulu obunzulu nobuqili. Kwabaninzi bexesha lokufunda abafundi, liphezulu kuneMathorhorn. Akungabazeki ukuba abaninzi baye bathumela kwisicatshulwa kwisimo sokuqhawula ngokugqibeleleyo ukuze bafumane le ntlupheko ye-gatha ekupheleni. Ekugqibeleni, into eqondakalayo!
Kodwa ngaba kunjalo?
Oko iGatha ithetha
Encwadini yakhe, u- Thich Nhat Hanh uthi "izinto ezidaliweyo" (khangela inguqulelo ye-Red Pine, ngasentla) okanye "izinto ezibhaliweyo" azikho into abonakalayo.
Izinto ezidibeneyo zonke izinto zengqondo eziye zaphakanyiswa ukuba zivele zikhona, zize ziphele, kwaye zinyamalale, ngokuya kumgaqo wokuxhomekeka oxhomekeke kuyo . Yonke into ebomini ibonakala ilandele le ndlela, kwaye, nangona izinto zibukeka zinyani, Eyona nto injengezinto ogqirha azenzayo. Siyabona kwaye siziva ngokucacileyo, kodwa azinjalo ngokwenene. "
Umphengululi-umhumushi u-Edward Conze unikela iSanskrit ngokuguqulela isiNgesi -
I-Taraka timiram dipo
ISupinam vidyud abhram ca
Njengeenkwenkwezi, iphoso lombono, njengesibane,
Umboniso ohlekisayo, umonyo wehla, okanye ibhola,
Iphupha, ukukhanya kwelanga, okanye ifu,
Ngaloo mntu makangayijonga ukuba yintoni imeko.
I-gatha ayikuthi nje isitsho ukuba yonke into iphela; Usixelela ukuba yonke into ayimanga.
Izinto azibonakali zikhona. Akufanele sinyengiswe ngokubonakala; asifanele sibheke ama-phantom njenge "okwenene."
Thich Nhat Hanh uyaqhubeka,
"Emva kokufunda le ndinyana sinokucinga ukuba uBuddha uthe zonke i- dharmas [ ngokwempawu yeengxaki ] zingapheliyo-njengamafu, umsi, okanye umbane wombane. UBuddha uthi, 'Zonke i-dharmas zihlala zingapheli, 'kodwa akatsho ukuba abalapha, ufuna ukuba sibone izinto ngaphakathi kwazo, sinokucinga ukuba sesele siqonde into eyinyani, kodwa, eqinisweni, siyaziqonda kuphela imifanekiso yayo. kwizinto, siya kukwazi ukuzikhulula ekukhohlisweni. "
Oku kusikhomba kwiimfundiso zobulumko, ezizona ziimfundiso eziphambili ePrajnaparamita Sutras. Ubulumko kukuqonda ukuba zonke iziganeko ezingenanto, kwaye naziphi na izinto esizibanikayo zivela kwisimo sethu sengqondo. Imfundiso ephambili ayikho into yokuba izinto zingapheliyo; kubhekisela kwimeko yobomi babo obungapheliyo.
Amakhadi e-Islamic Salute for Holidays
Ixesha loPhando - 1492 - 1585
Iingoma eziphezulu zeR & B zeKrisimesi zokukhanyisa iholide lakho
Indlela eya kwiCave Inmost kwihambo likaHero